Mucaaradka oo wada qorshe lagu xaqiijinayo in Farmaajo ay sharciyadda ka dhacdo | Warkii.com
Home warkii Mucaaradka oo wada qorshe lagu xaqiijinayo in Farmaajo ay sharciyadda ka dhacdo
Mucaaradka oo wada qorshe lagu xaqiijinayo in Farmaajo ay sharciyadda ka dhacdo
Musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku dhowaaqaan guddi doorasho oo liddi ku ah kan ay magacaabeen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka, sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Warkii.com.
Musharaxiinta ayaa tallaabadan qaadaya ayaga oo aan ku qanacsaneyn guddiyada la magacaabay, oo ay sheegeen inay ku awood sheegatay xukuumadda, sidoo kalena laga buuxiyey shaqaale dowaldeed iyo xubno sirdoon ah.
Haddii ay sidan sameeyaan, waxay halis iyo buuq hor leh gelin doonta doorashada dalka, taasi oo keeni karta inay dib u dhacdo. Balse musharaxiinta ayaa door-bidaya dib u dhac intii ay gali lahaayeen doorasho ay si buuxda u maamuleyso madaxtooyada, sida ay Warkii.com xogta ku heshay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dadaal ugu jira in doorashada la qabto ka hor 8-da Febraayo oo muddo xileedkiisu ku eg yahay, isaga oo ka faa’iideysanaya maamul goboleedyo intooda badan uu gacanta ku hayo, iyo guddiyo doorasho oo ay saameyn xooggan ku leedahay madaxtooyada.
Dhankoodana, mucaaradka ayaa doonaya in doorashada ay dhowr bil dib u dhacdo, si marka waqtiga ka dhammaado Farmaajo uu ayaga ula mid noqdo, maadaama ay ka dhaceyso sharciyadda, sidaas darteedna ay la gorgortami karaan.
Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa sidoo kale taageersan qorshaha mucaaradka ayaga oo diidan ama dib u dhigaya magacaabista guddiyada doorashada heer dowlad goboleed, taasi oo xaqiijin karta inuu hirgalo qorshahan, halka saddex maamul goboleed kale ay noqdeen kuwa ay si toos ah u maamusho madaxtooyada.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale si dadban qorshahan shaaca uga qaaday kadib wareysi uu siiyey Taleefishinka Universal.
“Madaxweyne Farmaajo waqtigu isaga ayuu ku socdaa oo laba bilood ayaa u harsan, waxaan leeyahay waqtiga ha iska lumin, wiilka Nabad sugidda kuu joogana yuusan waqtiga kaa lumin, doorasho aanaa raali ka aheyn lagu qaban maayo Muqdisho, taas ayaan balan qaadaa,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
“Waa inaan ku qanacnaa doorashada, siyaasiyiin ayaan nahay deegaanka ayaan ka soo jeednaa, waa u tartameynaa inaan xukunaan rabnaa, Puntland iyo Jubbaland waxaa ku saxanyihiin inay waxaan diidaan, kuwa yeelayna waa qaldanyihiin,” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Ugu dambeyntii loolanka hadda socda ayaa ah Farmaajo oo doonaya doorasho deg deg ah oo dhacda kahor 8-da Febraayo, iyo mucaaradka oo isku dayaya inay sharciyadda ka dhacdo kadibna ay miiska la fariistaan.
Previous articleGolaha shacabka oo maanta ansixiyey guddi cusub oo uu muran ka taagan yahay
Next articleAbiy oo diiday cadaadis caalami ah kadibna qaaday tallaabo kasii dartay dagaalka
Cadaadiska la saaray Cabdi Xaashi oo laga digay arrin halis oo...
Senataro Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya waa qofka ugu sareeyo dadka matala gobalada Waqooyi ee Soomaaliya (Somaliland)...
Mucaaradka oo wada qorshe lagu xaqiijinayo in Farmaajo ay sharciyadda ka...
Al-Shabaab oo weerar ku qaaday saldhigyo ay ku sugan yihiin...
Diyaarad dagaal oo lagu soo riday dagaalka gobolka Tigrayga & Wararkii...
Safaaradda Mareykanka oo war soo saartay kadib doorashadii Guudlaawe
Qoys Hindi ah oo dacwo ka ah seyga gabadhooda oo ku...
Mahad Salaad oo shaaciyey arrin uga baxday hadallada Rooble iyo Mahdi...
Mursal oo walaac ka muujiyay sida Villa Somalia ay u waddo...
Muuse Suudi: “Reer Ow-Xasan iyo Reer Waqooyi waa naga ceshan waayeen...
Madaxweynayaasha Maamul Gobaleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa maalmahan ka aamusan siyaasada...
Ammaanka Jowhar oo la adkeeyey & Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada...